China Cold zọ akpụzi, Die Nkedo akpụzi, CNC lathe machining, Silicone matarasị Manufacturers Ma Suppliers - Dongguan FUYA metal & Plastic Products Co., Ltd.
Ngwa iku ume siri ike
Ihe nkpuchi echeghari maka umuaka
Oyi zọ ebu
Die nkedo ebu
Dongguan Fuya Hardware & Plastic Products Co., Ltd. e guzobere na 2008. Ọ bụ a ụlọ ọrụ tụnyere R&D, imewe, mmepụta na ahịa. Lọ ọrụ ahụ bụ nnukwu azụmaahịa; plastik, ngwaahịa ụlọ, ndị na-eyi akwa, nko ụlọ, nko nko, mkpochi, mkpuchi eletriki, mkpuchi ngosi, ntị ntị, pọọsụ mma, wdg, ngwaike, nhazi aluminom, okwu ekwentị mkpanaaka, okpokoro ekwentị, ogwe ọkụ, Nkwukọrịta nkwukọrịta sink, CNC machining nke akụkụ, wdg Akụrụngwa Fuya nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 setịpụrụ Japan Tsugami na (CNC) igwe na-atụgharị igwe na igwe na-egwe ọka, nkenke akpaka na akụrụngwa inyeaka. Iji na-agbaso oke nkenke nke nhazi CNC, ụlọ ọrụ ahụ nwere ngwá ọrụ nyocha dị elu dị ka ihe eji atụ ihe, akụkụ atọ, akụkụ abụọ, onye na-anwale ihe ike, onye na-enyocha infrared automatic, roundness, roughness na na. Ka ị na-aga n'ihu na-emeziwanye ọrụ injinia ya na ike ọrụ aka ya, Fuya Hardware na-adabere na mmepụta na njikwa njikwa bara ụba iji mezuo mgbanwe site na nrụpụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe na teknụzụ na ngalaba e-commerce, na-esochi usoro akụ na ụba ihe ọmụma na akụ na ụba netwọkụ. , ma gbalịsie ike ịmepụta ụlọ ọrụ teknụzụ. Jiri nwayọ guzobe ókèala mba ụwa dabere na ala China ma gbasaa n'akụkụ ụwa niile. Gbalịsie ike bụrụ onye isi na-ahụ maka mgbanwe ụlọ ọrụ na nwelite na Pearl River Delta. Mepụta ihe evergreen na-akpata "ogologo oge, nkwụsi ike, mmepe, teknụzụ na mba ụwa"!
Adreesị: 101lọ 101, Blọ B, No.15 Huabutang, Obodo Changan Tang, Dongkeng Town, Dongguan City
Ozi E-mail: wjhy6688@163.com
Nwere ike ịkpọtụrụ anyị maka ajụjụ ọ bụla. Ọnụahịa na ọrụ anyị ga-eju gị afọ ~
Kedu ihe nkpuchi silicone? Ọ dị njọ maka gị?2020/10/28
Site na mmụba nke ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ, ahụike ụra ha dịkwawanye mkpa.
Travel dị mkpa - Retractable mpịachi hangers2020/10/28
You nwetụla mgbe ị nọ n'ọnọdụ ịchọrọ ịkwanye uwe maka ihicha n'oge ọ bụla, mana akwa uwe ahụ na-ewe ohere dị ukwuu.
Kedu afọ ole nwatakịrị ga-amalite iji pillowï¼Ÿ2020/10/27
"Afọ ole ka nwata ga - eji ohiri isi mee?" Isiokwu a abụrụla okwu dị mkpa n'ụwa nne na nna. Ezinụlọ anyị fọrọ nke nta ka ha bido agha obodo maka okwu a ụnyaahụ, mgbe m rụrụ ụka siri ike megide nrụgide nne m kwuru na nwa ahụ kwesịrị ịnọ ndina site na onwa nke onwa ato wee wee okwu ojoo ya banyere nne na nna. N'ezie, nke ikpeazu ma obu nne m ka "are bughi m welitere ya? O meriri mmeri oke ala. Adịghị m njikere ịla n'iyi, yabụ m ga-akọwara gị echiche ziri ezi.
You ga-esi ọnwụ na ị na-etinye nkpuchi2020/10/26
Na 2020, n'ihi mmetụta nke ọrịa a, a ga-agbanwe ndụ ndị mmadụ na ọrụ ha. Ọbụna n'oge Ememe Mmiri na-ekpo ọkụ gara aga, ndị mmadụ ga-ezo n'ụlọ. Mana site na ọrịa a, mba niile ejirila otu. Lee ka ọtụtụ ndị dọkịta na ndị nọọsụ na-akwụsịbeghị ruo nwa oge, ndị agha ole rurula n'ọrụ ha! N'afọ a, anyị dabere na mbọ onye ọ bụla iji lanarị, mana anyị enweghị ike iwepu ihe nkpuchi anyị.
Ohiri isi maka isi ma obu olu?2020/10/26
Okenye kwesịrị ihi ụra ihe dị ka awa asaa ma ọ bụ itoolu kwa ụbọchị. N'aka ozo, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndụ na-ehi ụra.
Akụkọ nke Masks2020/10/24
China bụ mba mbụ ụwa jiri iji ihe nkpuchi mee ihe. N'oge ochie, iji gbochie ájá na mmetọ ikuku, ndị mmadụ nọ n'ụlọ ikpe malitere ikpuchi ọnụ na imi ha site na ịcha akwa silk. "Mencius · From Low" ndekọ: "Xi Zi adịghị ọcha, mgbe ahụ ndị mmadụ niile na-ekpuchi imi ha wee gafere.